आजदेखि सेनाको जिम्मामा जनसेना, वैद्य पक्ष विरोधमा उत्रियो « paniphoto
« के अब माओवादी र प्रचण्ड ‘सकिएकै’ हुन् त ? जहाँ, जेलभित्रैबाट सभासदले तलब माग्न पाउँछन् ! »	आजदेखि सेनाको जिम्मामा जनसेना, वैद्य पक्ष विरोधमा उत्रियो
By -दिपध्वनी- on Tuesday April 10, 2012	अपडेट : माओवादी जनसेनालाई नेपाली सेनाको मातहतमा ल्याएको कार्यलाई माओवादी वैद्य पक्षले विरोध गरेको छ । सो समुहले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो आत्मसमर्पणको पराकाष्ट भन्दै चक्काजाम लगायत पार्टी अध्यक्षकै पुत्ला दहन गर्नेसम्मका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आजदेखि सेनाको जिम्मामा !शान्ति पक्रियाले आज निकै ठुलो फड्को मारेको छ । आजै बसेको विशेष समितिको बैठकले औपचारिकरुपमा आजबाट माओवादीका जनसेना(लडाकु)लाई सेनाको जिम्मा लगाएको छ । योसँगै माओवादी औपचारिकरुपमा जनयुद्ध त्यागेका पार्टीमात्र होइन, सेना र हतियार नभएको नागरिक पार्टी बनेको छ । पढ्नुहोस् यो ऐतिहासिक निर्णय,
« के अब माओवादी र प्रचण्ड ‘सकिएकै’ हुन् त ? जहाँ, जेलभित्रैबाट सभासदले तलब माग्न पाउँछन् ! »	2 comments to आजदेखि सेनाको जिम्मामा जनसेना, वैद्य पक्ष विरोधमा उत्रियो
· जवाफ दिनुहोस्	हैन म त आज बाट किरण को सपोट गरु कि के हो?? पार्टी छोड्न मन पनि छैन मान्छे मन परेको पनि छैन !!!!
के गरु !!!! हरे राम राम राम के हुने होला हाम्रो नेपाल @@@@@@ कमेन्ट गर्नु होला ल !!!
सबै साथी हरुले !!!
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	शान्ताराम लकान्द्री
· जवाफ दिनुहोस्	ओहो माओवादी अध्यक्षले यस्तो पनि गर्न सक्दा रहेछन् । केही दिन वैद्यहरु पक्कै उफ्रिएलान् तर समाधान चै अध्यक्षकै कार्यले निकाल्ने छ । यो नेपाली जनताको लागि साँच्चै नै ठुलो दिन हो ।